အသံဖိုင် | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label အသံဖိုင်. Show all posts
ရခိုင်အကြံပေးကော်မရှင် အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်
ရခိုင် ပြည်နယ် အတွင်း ဘာသာရေးနဲ့ လူမျိုးရေး အပေါ် အခြေခံပြီး လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့် ခွဲခြား ကန့်သတ် တာတွေကို အဆုံး သတ်ဖို့ ရခိုင်ပြည်နယ် ဆိုင်ရာ အကြံပေး ကော်မရှင်က မြန်မာ အာဏာပိုင်တွေ ကို အကြံပေး တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံသား စီစစ်ရေး ကဒ်တွေ ထုတ်ပေးဖို့နဲ့ လွတ်လပ်စွာ သွား လာခွင့်တွေ ပေးဖို့ ကိစ္စရပ်တွေ အပေါ် စိုးရိမ် မှုတွေ ရှိနေ ကြပေမယ့် ဒီအချက်တွေဟာ ပဋိပက္ခ ဖြေရှင်းရေး အတွက် မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက်တွေ ဖြစ်တယ်လို့ ကော်မရှင်ရဲ့ ဥက္ကဌ ကုလအတွင်း ရေးမှုး ချုပ်ဟောင်း Kofi Annan က ဒီကနေ့ ပြုလုပ်တဲ့ ကော်မရှင်ရဲ့ အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အပြည့်အစုံကို ကိုယ်တိုင် သွားရောက်သတင်းယူခဲ့တဲ့ မမြင့်မြင့်ခိုင် က ပြောပြပေးမှာပါ။
အမေရိကန် အနောက်တောင်ခြမ်း အပူလှိုင်းပြင်းထန်လို့ လူသေဆုံး
Arizona Sonoita မှာ ပြင်းထန်တဲ့ အပူလှိုင်းကြောင့် တောမီး လောင်ကျွမ်း ( ဇွန် ၂၀-၂၀၁၇)
အမေရိကန် အနောက် တောင်ဘက် ခြမ်းမှာ ပြင်းထန်တဲ့ အပူလှိုင်းတွေ ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အတွက် လူ ၆ ဦးထက် မနည်း သေဆုံး ခဲ့ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Los Angeles ဘက်မှာတော့ သောကြာနေ့က အပူချိန် အနည်းငယ် ပြန်လည် သက်သာ လာပေမယ့် ပူပြင်းတဲ့ နွေရာသီ အတွက်ကို ဒေသခံ တွေက ကြိုတင် ပြင်ဆင်နေ ရပါတယ်။
California၊ Palm Springs၊ Arizona နဲ့ Tucson မြို့တွေအပါအ၀င် အမေရိကန် အနောက် တောင်ဘက်ခြမ်း နေရာဒေသ အတော် များများမှာ ဒီသီတင်းပတ် အစော ပိုင်းက အပူချိန် ၄၅ ဒီဂရီ Celsius နဲ့ အထက် ရှိတာကြောင့် Phoenix မြို့မှာ လေယာဉ်တွေ ဆင်းသက်ခဲ့ ရပါတယ်။
ဒေသတ၀ိုက်မှာရှိတဲ့ ရပ်ကွက်အတွင်း လုထုစုဝေးရာနေရာတွေက လေအေးစက်ဖွင့်ထားတဲ့ နေရာတွေနဲ့ ရေပန်းဖွင့်ထားတဲ့ အပန်းဖြေ ဥယာဉ် နေရာတွေမှာ လူတွေ သွားရောက် စုဝေးကြပြီး အအေးခံနေ ရပါတယ်။
အနောက်ဘက်ခြမ်းတလျှောက် ဟိုတကွက် ဒီတကွက် မီးလောင်တာတွေ နေရာအနှံ့မှာဖြစ်ပွားနေပြီး Nevada, Arizona နဲ့ California ဒေသတွေမှာ အပူ လွန်ကဲမှုကြောင့် သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ အပူဒဏ်ကို လူတွေမက တိရိစ္ဆာန်တွေလည်း ခံစားနေကြရပြီး အသက်အန္တရာယ်အတွက် စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
Phoenix တိရိစ္ဆာန်ရုံအတွင်းက ဆင်တွေ အပူသက်သာစေဖို့ တိရိစ္ဆာန်ရုံ တာဝန်ရှိသူတွေက ဆင်တွေရဲ့ ခြေဖ၀ါးတွေကို ရေပက်ဖြန်းပေးကြရပါတယ်။
အပူချိန်လွန်ကဲမှုကြောင့် သေဆုံးနိုင်တဲ့ အတွက် မိဘတွေ၊့ ကလေးငယ်တွေနဲ့ အိမ်မွေး တိရိစ္ဆာန်တွေကို ကားထဲမှာ ချန်မထားကြဖို့ တာဝန်ရှိ သူတွေက သတိပေး ထားပါတယ်။
ကဏ္ဍ နိုင်ငံတကာသတင်း, သဘာဝဘေးအန္တရယ်များ, အသံဖိုင်
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေ အပေါ် နိုင်ငံတကာနဲ့ အာဆီယံ အိမ်နီးချင်းတွေ စိတ်ဝင်စား
အာဆီယံ ဒေသ ဆိုင်ရာ ဖိုရမ် ဆွေးနွေးပွဲ (Ministry of Foreign Affairs Myanmar)
အရှေ့တောင် အာရှ အသင်း အာဆီယံ ဒေသတွင်း ဖိုရမ် မှာတော့ ဒေသတွင်း ပေါ်ပေါက် လာနိုင်တဲ့ ပဋိပက္ခ တွေကို ကြိုတင် အသိအပေး ကာကွယ်နိုင်ရေး အဓိကထား ဆွေးနွေး ခဲ့ကြ ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ တွင်းက လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေ၊ နောက် ရခိုင်ဒေသ ဘက်က အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက် မှုတွေ အပေါ် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသလို ဒေသတွင်း နိုင်ငံ တွေရဲ့ ပဋိပက္ခ ကြိုတင် အသိပေး ကာကွယ်ရေး စနစ်တွေ၊ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ မသိင်္ဂီထိုက် စုစည်း တင်ပြထားပါတယ်။
ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့ ပဋိပက္ခတွေကို ကြိုတင် အသိပေးခြင်း၊ သံတမန်နည်း အရ ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို အရှေ့တောင် အာရှ နိုင်ငံများ အသင်း အာဆီယံ ဒေသဆိုင်ရာ ဖိုရမ် အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ ၂၇ နိုင်ငံက ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်တွေ ရန်ကုန်မြို့မှာ သုံးရက်ကြာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပဋိပက္ခကြိုတင် အသိပေး ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ယန္တယား တည်ဆောက်ထားတဲ့ အကြောင်းကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။ အာဆီယံ ဖိုရမ်မှာ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့သူ တဦးဖြစ်တဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ ဦးမင်းဇော်ဦးက အခုလို ပြောပါတယ်။
“၂၀၁၂ ကတည်းကနေပြီးတော့ data တွေစုပြီးတော့ Township Conflict Monitoring Systemဆိုတာကျနော်တို့ တည်ဆောက်တာရှိတယ်။ အဲဒါက ဘာလဲ ဆိုတော့ မြို့နယ်တခုချင်းစီမှာ ရှိတဲ့ ပဋိပက္ခအခြေအနေပေါ့နော် TCMS (Township Conflict Monitoring System ) ဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့ တည်ဆောက် တာရှိတယ်။
ဒါကတော့ ကျနော်တို့ မြို့နယ်တွေတခုချင်းစီမှာ ပဋိပက္ခအနေတွေဘယ်လိုရှိသလဲ ၊ ပြဿနာတွေ ပိုကြီးနိုင်သလား၊ ပြဿနာတွေ ပိုငယ်သွားနိုင်သလား ၊ ပြဿနာတွေက ဘယ်ကိုဦးတည်နေသလဲ စသဖြင့်ပေါ့နော် သုံးသပ်လို့ရတဲ့ စနစ်တခုကို ကျနော်တို့တည်ဆောက်တာရှိတယ်ပေါ့နော်။ ဆိုတော့ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ကလည်း Presentation လုပ်တော့ မြန်မာပြည်မှာလည်း ဒီလိုစနစ်မျိုးတွေ လုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလည်း။”
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေ၊ နောက် ရခိုင်ဒေသ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း ဖိုရမ်မှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဦးဆောင် ဆွေးနွေးသူ တဦး ဖြစ်တဲ့ ဦးမင်းဇော်ဦးက အခုလို ပြောပါတယ်။
“အခုကျနော်တို့ မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ ဒီအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကတော့ ဒီမှာရှိတဲ့ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခပေါ့နော် အခုဖြစ်နေတာတွေကို စိတ်ဝင် စား တာ ရှိပါတယ်။
နောက်တခုက ရခိုင်ဘက်က အခုလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ့နော် ဒီမွတ်စလင်အုပ်စုတွေ အစိုးရအုပ်စုတွေ လက်နက်ကိုင် တိုက်ခိုက် မှုတွေ ရှိလာတဲ့ အခါမှာ အဲဒါကိုတော့ နိုင်ငံတကာ ကလည်း အထူးသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံနဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အိမ်နီးချင်းမဟုတ်ပေမယ့် ဖြစ်စဉ်အရ ဆက်စပ်တဲ့ နိုင်ငံတွေရှိတယ်၊ ဥပမာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ၊ မလေးရှားတို့၊ အင်ဒိုနီးရှားတို့ ဒါမျိုးတွေကိုလည်း သူတို့တွေ စိတ်ဝင်စားမှုရှိပါတယ်။
အဲဒီတော့ ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခနဲ့ ကိစ္စအရပ်ရပ်ကိုတော့ အာဆီယံနိုင်ငံ အကြားထဲမှာတော့ စိတ်ဝင် စားမှု ရှိကြပါတယ်။”
ဒေသတွင်း ဖိုရမ် ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ အဓိက အားဖြင့် လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်း၊ နောက် လူမှုဆက်ဆံရေး ကွန်ယက်တွေ၊ မီဒီယာတွေကို အခြေခံပြီး ဒေသတွင်းမှာ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ရှိနေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေကို ကြိုတင် ခန့်မှန်းပြီး အသိပေး ကာကွယ်ရေးနဲ့ လုပ်နည်း လုပ်ဟန်တွေကို ဆွေးနွေးကြတာပါ။
ထောက်လှမ်းရေး အချက် အလက်တွေ အပေါ် အခြေခံတဲ့ အကြမ်းဖက် ၀ါဒစွဲ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း အနည်းငယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဒေသတွင်း ပဋိပက္ခ ကြိုတင် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ စနစ်တွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မရှိသေးပေမယ့် လက်တွေ့ ကျင့်သုံးနေတဲ့ နိုင်ငံတွေလည်း ရှိနေပြီး ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုလည်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေ၊ တာဝန်ရှိသူတွေ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
“ထိုင်းမှာဆိုရင် Early warning နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့လုပ်ထားတာတွေရှိတယ်။ ထိုင်းမှာ ဥပမာ-Deep South Watch တို့ပေါ့နော် တောင်ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ လုပ်ထားတဲ့ စနစ်တွေရှိတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်မှာဆိုရင်လည်း အလားတူပေါ့နော် အဲလိုမျိုးတွေရှိတယ်။ အဓိကတော့ Early warning နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့ အာဆီယံအတွင်းမှာကတော့ ဒီလောက် Advance တော့ မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်။ အာဆီယံမှာတော့ ဒီ idea တွေတော့ရှိနေပြီ တချို့တိုင်းပြည် မှာလည်း သူ့ဟာနဲ့ သူတော့ လုပ်နေကြတာတော့ ၇ှိပါတယ်။”
ရန်ကုန်မြို့မှာ သုံးရက်ကြာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အာဆီယံ ဖိုရမ်ကိုတော့ မြန်မာ၊ ဥရောပ သမဂ္ဂနဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတို့က ပူးတွဲ ဥက္ကဌတွေ အဖြစ် ဆောင်ရွက် နေတာပါ။
လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ထိပါးနိုင်မှုတွေကို လျှော့ချရေး နိုင်ငံမျိုးစုံရဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ အမြင်တွေကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ အတွက် ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ စတင် တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ အာဆီယံ ဒေသတွင်း ဖိုရမ် ARF မှာတော့ အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင် ၁၀ နိုင်ငံ အပြင် အမေရိကန်၊ တရုတ်၊ ကနေဒါ၊ သြစတေးလျ၊ နောက် အာရှ ပစိဖိတ်ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေနဲ့ အတူ နိုင်ငံပေါင်း ၂၇ နိုင်ငံ အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ပါဝင်ပါတယ်။
From : ဗွီအိုအေမြန်မာသတင်းဋ္ဌာန by - (မသိင်္ဂီထိုက်)
လူ့အခွင့်ရေး ရုပ်ရှင် VOA ဆု၊ ဒါရိုက်တာ ကောင်းမြတ်သူကျော်ရဲ့ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ရရှိ
၂၀၁၇ လူ့အခွင့်ရေး ရုပ်ရှင် VOA ဆု ပေးပွဲ
ပဉ္စမ အကြိမ် မြောက် ကျင်းပတဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် လူ့အခွင့် အရေးနဲ့ လူ့ဂုဏ် သိက္ခာ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင် ပွဲတော်မှာ ဒီကနေ့ ဆုရရှိတဲ့ မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင် တွေကို ချီးမြှင့် ပါတယ်။
မြန်မာနဲ့ နိုင်ငံ တကာက ရိုက်ကူးတဲ့ မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်၊ ဇာတ်လမ်းတို ၆၄ ကားထဲကနေ ဆု ၆ ဆု ရွေးချယ် ပေးအပ်တာ ဖြစ်ပြီး ဒီအထဲမှာ VOA အမေရိကန် အသံ ကလည်း ဗွီအိုအေ မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်ဆု ချီးမြှင့် ခဲ့ပါတယ်။
ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်ကနေ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ပါဝင်ချီးမြှင့်တာဖြစ်ပြီး၊ ဒီနှစ် ဗွီအိုအေရဲ့ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဆုကို ဒါရိုက်တာ ကောင်းမြတ်သူကျော် ရိုက်ကူးတဲ့ Deep Inside Her မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်က ရရှိသွားပါတယ်။
ထူးချွန်ထက်မြက်ပြီး ရည်မှန်းချက်ကြီးမားတဲ့ ကျောင်းသူ မိန်းကလေးငယ်တဦး… လက်ရှိပညာရေးစံနစ်အတွင်းမှာ ရှိနေဆဲ ကျားမ ခွဲခြားကန့်သတ်မှု စည်းမျဉ်းတခုကြောင့် အနာဂတ် ဘဝရည်မှန်းချက် ပျက်စီးခဲ့ရပုံကို မီးမောင်းထိုးပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ VOA ကနေပြီးတော့ ပထမဆုံးပေးတဲ့ဆု ကတော့ ရိုးမြေကျဆိုတဲ့ ဇတ်ကားလေး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆု (နိုင်ငံတကာမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဆု) ကိုတော့ - “မရမ်းခြံ - Waves of Transition” လို့ နံမည်ပေးထားတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေးက လှေဆိပ် အလုပ်သမားတွေ အကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်က ရရှိသွား ပါတယ်။
ဒီကားကိုတော့ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကနေ ၀င်ပြိုင်တာ ဖြစ်ပြီး ရိုက်ကူးသူကတော့ ဂျိုနား ရှူး Jonas Scheu ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆု (ပြည်တွင်း မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်ဆု) ကိုတော့ “Non Fossils - အသွေးအသားဖြင့် တည်ဆောက်သည်” ဆိုတဲ့ မိုးသစ်ဆက်ထွန်း ရိုက်ကူးတဲ့ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်က ရရှိသွား ပါတယ်။
ဒီကနေ့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားကို နော်ဝေသံအမတ်ကြီးနဲ့ British Council ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ လွှတ်တော်အမတ် တချို့လည်း တက်ရောက်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပဉ္စမအကြိမ် လူ့အခွင့်အရေး လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ဆုပေးပွဲကို ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပတာမှာ VOA ဆုအတွက် Deep Inside Her မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအခမ်းအနားကို ကိုယ်တိုင် တက်ရောက် ဆုချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ VOA အမေရိကန်အသံ မြန်မာပိုင်းဌာန၊ ဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်းကို ကိုအောင်အောင်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းစဉ် သူက အခုလို စဖြေပါတယ်။
ဖြေ။ ။ကျနော်တို့ VOA အတွက်ကို ဆုပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ ရွေးချယ်ဖို့ ကျနော်တို့ ဆီကိုပေးထားခဲ့တဲ့ စုစုပေါင်း ဇာတ်ကားပေါင်း ၂၅ ခုကနေပြီးတော့ တကားကို ကျနောတို့ ရွေးရပါတယ်။
ကျနော်တို့ရွေးလိုက်တဲ့ကားကတော့ Deep Inside Her ဆိုတဲ့ ရှပ်ရှင်ဇာတ်ကားတိုလေးပါ။ အဲဒါက မြန်မာလိုတော့ နာမည်ပေးမထားဘူးပေါ့လေ ၊ ဒါပေ မယ့်လည်း အကြမ်းဖျင်းဘာသာပြန်ရင်တော့ သူမရဲ့အတွင်းစိတ်သဏ္ဍန်ပေါ့နော် ခံစားရမှုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
အကြောင်းအရာကတော့ ဘာလဲဆိုတော့ အထူးသဖြင့် အထက်တန်းကျောင်းအောင်တဲ့ အမျိုးသမီးလေး၊ မိန်းကလေးငယ်လေးတယောက် ပေါ့နော် ကျောင်းသူလေး ၁ ယောက်အနေနဲ့ ၆ ဘာသာဂုဏ်ထူးနဲ့ အောင်ပေမယ့် အမှတ်က ဆေးတက္ကသိုလ်ကိုဝင်ခွင့်ရဖို့ ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အမှတ်တွေ မညီတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ သူ့အနေနဲ့ ၀င်ခွင့်မရခဲ့ရဘူးလို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပါပဲ။
အဲဒါက ဒီစနစ်က တကယ်တန်းပြောလို့ရှိရင် အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကို ဆေးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရဖို့ အမှတ်တွေ မြှင့်ထားတယ်ဆိုတာက တမင်ခွဲခြားထားတဲ့ မမျှတတဲ့ ပညာရေးစနစ်တခုပေါ့နော်၊ ဒီလိုစနစ်ကြောင့် ကျောင်းသူလေးတယောက်ရဲ့ ဘ၀ရည်မှန်းချက် ပျက်သွားခဲ့ရတဲ့ ပုံလေးကို အခြေအနေကို မီးမှောင်းထိုးခဲ့ရုပ်ရှင်ဇတ်လမ်းတိုလေးပါ တကယ့်အဖြစ်အပျက်ပါ။
ဒီ အင်းလေးဒေသက ကျောင်းသူလေးတယောက်အကြောင်းကို သွားပြီးရိုက်ထားတာပါ။
မေး။ ။အခုဆိုရင် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကျင်းပလာတာ ၅ နှစ်မြောက်ရှိပြီပေ့ါလေ၊ ပြိုင်ပွဲဝင်ဇတ်ကားတွေရဲ့ အရည်အသွေးပိုင်းမှာရော ပိုပြီးတော့ တိုးတက် လာတာရောတွေ့ရပါသလား။
ဖြေ။ ။ကျနော်တို့ကတော့ မနှစ်ကနေစပြီးတော့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာ ၀င်ပါခဲ့တယ် မနှစ်ကစပြီးတော့လည်း ကျနော်တို့ VOA ဆုကို ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ မြင်ရသလောက်ကတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရဲ့ အရည်အသွေးက မြင့်လာတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
အထူးသဖြင့် Camera ပိုင်း technical ပိုင်းမှာ ပိုပြီးတော့ မြင့်လာတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အတွေးအခေါ်အပိုင်းမှာလည်း ဇတ်လမ်းကို တင်ပြနိုင်တဲ့ ဖော်ပြနိုင်တဲ့ အနေအထားလေးတွေကလည်း တော်တော်လေး တိုးတက်လာတာကို ကျနော်တွေ့ပါတယ်။
ဖြေ။ ။ဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်က ကျင်းပတဲ့ ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ ၁၉ ရက်နေ့အထိပဲ မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ သူတို့ အခု ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ ပါဝင်တင်ပြတဲ့ ရခဲ့တဲ့ ဇတ်ကားတိုလေးတွေကိုပေါ့နော် သူတို့ နယ်တွေအနှံ့ကိုလိုက်ပြပြီးတော့ လူတွေတော်တော်များများမြင်သွားအောင်ပေါ့နော် အဲလိုပြတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကဆိုရင် လူပေါင်း ၁ သိန်းကျော်ကို ကြည့်ရှု့နိုင်အောင် လိုက်ပြီးတော့ ပြနိုင်ခဲ့တယ်။ သဘောကတော့ ဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ ပြခဲ့တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ ဖောက်ဖျက်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို လူထုအနေနဲ့ သိရှိသွားတာပေါ့နော် ၊
ဥပမာအားဖြင့် ဒီနှစ်ကျနော်တို့ ရွေးပြီးဆုပေးလိုက်တဲ့ ပညာရေးစနစ်ထဲမှာ အမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားမှုကြောင့် အမျိုးသမီးလေးတွေ အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံး ရတယ် ဆိုတာက လူအများသိရင်လည်း သိပါလိမ့်မယ်၊ အမှတ်တမဲ့လည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် အထူးသဖြင့် ဒီမိုကရေစီပညာရေးစနစ်ကြီးမှာ ဒါမျိုးက မရှိသင့်တဲ့အခြေအနေပေါ့၊
ဥပမာအားဖြင့် နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင် ကုလသမဂ္ဂ အလုပ်အကိုင်ရာထူးတို့ ဆိုရင် အရည်အချင်းတူရင်တောင်မှ အမျိုးသမီးကို ဦးစားပေးပြီးခန့်ထားမယ်လို့ ကြေညာနေတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာပြည်မှာကျတော့ အမှတ်ချင်းတူတယ်ဆိုရင် ဆေးတက္ကသိုလ်သွားရင် ယောင်္ကျားလေးကိုပဲ ပေးရမယ်၊ အင်ဂျင်နီယာ သွားရင် ယောင်္ကျားလေးကိုပဲ ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ အကန့်အသတ်ရှိတာက မကောင်းဘူးပေါ့နော် ။
အဲဒါတွေကို လူထုအနေနဲ့ သိသွားပြီး ပြင်ဆင်နိုင်အောင် တွန်းအားပေးနိုင်မယ့် အခြေအနေလေးတွေလည်း ပေါ်လာမယ်လို့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ မြင်ပါတယ်။"
ပဉ္စမအကြိမ် လူ့အခွင့်အရေး လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ဆုပေးပွဲကို ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို ကိုယ်တိုင် တက်ရောက် ဆုချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ VOA အမေရိကန်အသံ မြန်မာပိုင်းဌာန၊ ဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်းကို ကိုအောင်အောင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
From : ဗွီအိုအေမြန်မာသတင်းဋ္ဌာန by - ( ဗွီအိုအေ (မြန်မာပိုင်း )( အောင်အောင် )
မျှဝေသူ ရစ် မောင် မှာ Tuesday, June 20, 2017 No comments:
ကဏ္ဍ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း, မြန်မာရေးရာ, အသံဖိုင်
အာရှဒေသတွင်း ထိပ်တန်း မီဒီယာ ဆုပေးပွဲမှာ Frontier Myanmar အသိအမှတ် ပြုခံရ
ဟောင်ကောင်မှာ ကျင်းပတဲ့ SOPA ဆုချီးမြှင့်ပွဲကို တက်ရောက်လာတဲ့ Frontier Myanmar အဖွဲ့ (ဓါတ်ပုံ- Sonny Swe Facebook)
ဟောင်ကောင် အခြေစိုက် SOPA ခေါ် အာရှ ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေ သူများ အစည်း အရုံးက ၂၀၁၇ ခုနှစ် အတွက် ဒေသတွင်း အကောင်းဆုံး မီဒီယာ ဆုများ ပေးအပ် ချီးမြှင့်တဲ့ အခမ်း အနားမှာ မြန်မာနိုင်ငံက Frontier Myanmar အပတ်စဉ် မဂ္ဂဇင်း ပထမဆုံး အကြိမ် အသိ အမှတ်ပြု ခံခဲ့ရ ပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ သတင်းမီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့် အန္တရာယ်ခြိမ်းခြောက်မှုတွေရှိနေချိန် အခုလို ဒေသတွင်း ထိပ်တန်း မီဒီယာ ဆုပေးပွဲမှာ မြန်မာသတင်းမီဒီယာ အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူမိကြောင်း Frontier Myanmar သတင်းထုတ်ဝေသူ ဦးဆန်နီဆွေက ပြော ပါတယ်။
ဇွန်လ (၁၅)ရက်နေ့က ဟောင်ကောင်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ SOPA ဆုပေးပွဲအကြောင်း မအင်ကြင်းနိုင်က စတင်မေးမြန်းရာမှာ ဦးဆန်နီဆွေက အခုလိုပြောပါတယ်။
“ဒီဆုက အာရှမှာတော့ အမြင့်ဆုံးပဲလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ကျနော်ရဲ့ team အနေနဲ့ရော၊ publication အနေနဲ့ရော ဒီထဲမှာ ဆုတခုများရခဲ့မယ်ဆိုရင် ဂုဏ်ယူ စရာလဲဖြစ်မယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုရင် အရင်တုန်းက Myanmar Times လဲ ရဖူးပါတယ်။ သုံးနှစ်ဆက်တိုက် သူတို့ ရဖူးတယ်။ ဆိုတော့ ကျနော့်အနေနဲ့ အားလဲ အားကျတယ်။ ကိုယ်လဲ ဖြစ်ချင်တယ်။ ကျနော်တို့ သတင်းအဖွဲ့ကိုလည်း confidence (ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု) ရှိစေချင်တယ် ဆိုပြီးတော့ ၀င်ပြိုင်ဖြစ်တာပါ။
အင်ကြင်းနိုင်။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ဒီလို သတင်းမီဒီယာတခုအနေနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရပ်တည်ခွင့်ရအောင် ငွေကြေးဆိုင်ရာအရ လွတ်လပ်မှုရှိအောင် ကြိုးစားရတဲ့ အခြေအနေကို ရှင်းပြလို့ရမလားရှင့်။
ဦးဆန်နီဆွေ။ ။ ကျနော်တို့က လက်ရှိမှာတော့ ကိုယ့်အိတ်ထဲက ပိုက်ဆံနဲ့ပဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကြိုးစားနေပါတယ်။ ကျနော်နဲ့ ကျနော်ရဲ့ partner Sylvia Saw McKaige က စင်္ကာပူ အခြေစိုက်ပါ။ သူက စင်္ကာပူမှာ ကုမ္ပဏီရှိပါတယ်။ သူရဲ့ အဓိက background ကတော့ သူက အရင်က CNBC မှာလုပ်ခဲ့တော့ broadcast လိုင်းကို တော်တော်လေး ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ print ပိုင်းဆိုင်ရာ background ပေါ့နော်။ အဲဒီအတွက် ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် ပူးပေါင်းပြီးတော့ Frontier Myanmar ကို ထူထောင်ဖြစ်တာပါ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က စခဲ့ပါတယ်။
အင်ကြင်းနိုင်။ ။ အဲတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခု အပြောင်းအလဲတွေလည်းဖြစ်လာပြီ။ NLD အရပ်သားအစိုးရလက်ထက်လည်း ရောက်လာပြီဆိုတော့ ကိုယ်ပိုင်သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ ပိုပြီးတိုးတက်လာမယ့် အနေအထားရှိပါသလားရှင့်။
ဦးဆန်နီဆွေ။ ။ ကျနော်တို့အားလုံးကတော့ ဘယ်လိုပဲပြောပြော expect (မျှော်လင့်ချက်တွေ) ထားပါတယ်။ အများကြီး ဒီထက်တိုးတက်လာဖို့။ ဒါပေမဲ့ အခုလောလောဆယ်မှာ သိပ်ပြီးတိုးတက်ဖို့ မမြင်ရသေးပါဘူး။ အထူးသဖြင့် မီဒီယာကဏ္ဍနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း ကျနော်တို့ရဲ့ တာဝန်သည် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မှန်မှန်ကန်ကန် ဘက်လိုက်မှုကင်းကင်းနဲ့ ဖေါ်ပြနိုင်ဖို့ဆိုတာ ကျနော်တို့ မီဒီယာတွေလုပ်ရမယ့် အလုပ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အကောင်းဆုံး၊ တာဝန်အကျေဆုံးဖြစ်အောင် ကျနော်တို့ လုပ်နေပါတယ်။
အင်ကြင်းနိုင်။ ။ အခုဆိုရင် ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ)နဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေကို တရားစွဲဆိုမှုတွေရှိနေတာဆိုတော့ Frontier Myanmar အနေနဲ့ရော သတင်းတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖေါ်ပြဖို့ အခက်အခဲတွေ ဘယ်လိုရှိလဲရှင့်။
ဦးဆန်နီဆွေ။ ။ စိန်ခေါ်မှု အခက်အခဲကတော့လေ ကျနော်တို့ တယောက်တည်းတင်မဟုတ်ပါဘူး။ ၆၆ (ဃ) ဆိုတာ အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်ပြီး အားလုံးနဲ့ အကြုံးဝင်နေတော့ အားလုံးက ဒီ risk (အန္တရာယ်) ကြီးကိုယူပြီးတော့ ထုတ်နေကြတာပါ။ ကျနော်တို့ရဲ့ editorial policy (အယ်ဒီတာ ဘုတ်အဖွဲ့ချမှတ်ထားတဲ့ မူဝါဒ)က ကျနော်တို့သည် criticize (ဝေဖန်မှု) လုပ်တယ်။
ဒါပေမဲ့ တဦးတယောက် ပြီးတော့ အသင်းအဖွဲ့ တခုခု ကို အရမ်းကာရော တိုက်ခိုက်တာမျိုး မလုပ်ပဲနဲ့ ထောက်ပြဝေဖန်မှုနဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ထောက်ပြဝေဖန်မှုမျိုး အနေနဲ့ ပဲ ကျနော်တို့ သွားပါတယ်။ သတင်းမီဒီယာဆိုတဲ့ လွတ်လပ်မှုအပိုင်းမှာတော့ ဘယ်လိုပဲပြောပြော ၆၆ (ဃ)လို risk (အန္တရာယ်) ကတော့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှရှိနေပါတယ်။
အင်ကြင်းနိုင်။ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတော့ သတင်းမီဒီယာတွေ အနေနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တင်ပြခွင့်ရသလားရှင့်။
ဦးဆန်နီဆွေ။ ။ အခုဟာက သူ့အသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ သူ့အုပ်စုတွေနဲ့ သူတို့ပေါ့နော်။ ပြီးတော့ Facebook မှာက အကောင့်အတုတွေနဲ့ တယောက်နဲ့ တယောက် တိုက်ခိုက်နေကြတာပေါ့။ ကျနော်တို့အနေနဲ့တော့ ကိုယ်ရေးတာကို မကြိုက်လို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်တာမျိုးတွေ အထိကို ကျနော်တို့လည်း ခံရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း ကျနော်တို့ရဲ့ ရပ်တည်ချက် မှန်ဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးက ဘယ်နေရာမှမဆို၊ ဘယ်နိုင်ငံမှာ မဆို ထိလွယ် ရှလွယ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ ဖြစ်ရပ်မှန်အတိုင်းပဲ တင်ပြဖို့ အမြဲကြိုးစားနေပါတယ်။
အင်ကြင်းနိုင်။ ။ အဲဒီအတွက်ရော ခြိမ်းခြောက်ခံရတာမျိုး ရှိပါလားရှင့်။
ဦးဆန်နီဆွေ။ ။ ကျနော်တို့ အသင်းအဖွဲ့အနေနဲ့ ခြိမ်းခြောက်ခံရတာမျိုးမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ reporters (သတင်းထောက်တွေ) ကတော့ ခြိမ်းခြောက် ခံရပါတယ်ခင်ဗျ။
မုန်းတီးရေးစာသားတွေ၊ အသက်အန္တရာယ်ခြိမ်းခြောက်တာမျိုးတွေ အဲတာတွေတော့ လာပါတယ်။ မောင်တောမှာ ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စဆိုရင် ကျနော်တို့ဆီက ကိုမြတ်ကျော်သူဆိုရင် အဲဒီကိုရောက်ပြီး report လုပ်နေတုန်းအချိန်မှာ ခြိမ်းခြောက်ခံရတာတွေရှိပါတယ်။
Frontier သတင်းတွေမှာ ဖေါ်ဖြပြခဲ့တဲ့ မွန်ပြည်နယ်ရှိ ကြက်တိုက်ပွဲများအကြောင်း ရေးသားပုံဖော်ထားတဲ့ When Feathers Fly (အမွေးအတောင်များ လေထဲ ပျံ့လွင့်နေသော အခါဝယ်) ဆောင်းပါးဟာ SOPA ဆုရဲ့ Excellence in Photography ကဏ္ဍမှာ Honourable Mention အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒါအပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ပဋိပက္ခများအကြောင်း ရေးသားထားတဲ့ ဆောင်းပါး ၄ ပုဒ်ကိုလည်း Explanatory Reporting ကဏ္ဍတွင် ဆုအတွက် နောက်ဆုံး အဆင့် အထိ ရွေးချယ် ခံခဲ့ရပါတယ်။
ကဏ္ဍ နိုင်ငံတကာသတင်း, မြန်မာရေးရာ, အသံဖိုင်
ပျောက်ဆုံး စစ်လေယာဉ်မှ Black Box ရှာတွေ့
ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ အပိုင်းစများအား ဆယ်ယူနေစဉ်
ခရီး သည်နဲ့ လေယာဉ် အမှုထမ်း ပေါင်း ၁၂၂ ဦး လိုက်ပါ သွားတဲ့ ပျက်ကျ တပ်မတော် လေယာဉ်ရဲ့ အချက် အလက် မှတ်တမ်း တင်စက် ၂ ခုကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိ ပြီလို့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ရုံးက သတင်း ထုတ်ပြန် ပါတယ်။
လေယာဉ် ပျံသန်းမှု မှတ်တမ်း တင်စက် (Black Box ) နဲ့ လေယာဉ် မောင်းခန်း အတွင်းက အသံ သွင်းစက် တို့ကို တွေ့ရှိတာ ဖြစ်ပြီး လေယာဉ် ပျက်ကျ ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်း ရင်းကို ဖော်ထုတ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နေ တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့က ဒေသခံ ငါးဖမ်းစက်လှေရဲ့ သတင်းပေးပို့ချက် အရ ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ လေယာဉ်ပျက်ရဲ့ အမြီးပိုင်းကိုလည်း ဒီကနေ့ အောင်အောင်မြင်မြင် ဆယ်ယူ ရရှိပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
လေယာဉ်ပေါ်မှာ လိုက်ပါသွားသူ ၁၂၂ ဦးထဲက အခုအချိန်ထိ ၉၂ ဦးတို့ရဲ့ ရုပ်အလောင်းတွေကို ရှာဖွေ ရရှိထားပြီး ၃၀ ဦးတို့ ပျောက်ဆုံးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ လေယာဉ်ပျက် ကိုယ်ထည် အပိုင်းအစတွေကို ဒေသခံ ငါးဖမ်းစက်လှေတွေ၊ တပ်မတော် ရေ တို့ ပူးပေါင်းရှာဖွေနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်ထုတ် တပ်မတော် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လေယာဉ်က ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့က တပ်မတော်သားတွေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို တင်ဆောင်ပြီး မြိတ်ကနေ ရန်ကုန်ကို ပျံသန်းစဉ်မှာ ထားဝယ်မြို့ အနောက်တောင်ဘက် ပင်လယ်ပြင်မှာ ပျက်ကျခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မျှဝေသူ ရစ် မောင် မှာ Monday, June 19, 2017 No comments:
တနိုင်း ဒုက္ခသည်များ နေရပ်ပြန်နိုင်ရေး အစိုးရ စီစဉ်နေ
ကချင် ပြည်နယ် တနိုင်းမြို့နယ် ထဲက ရွှေ ၊ ပယင်း မှော်တွင်း တွေက တိမ်းရှောင် လာတဲ့ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား တွေကို နေရပ်ရင်း ပြန်နိုင်ရေး လူမှု ဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည် နေရာ ချထားရေး ဝန်ကြီး ဌာန ဘက်က တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရတွေ နဲ့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ပေးနေ တယ်လို့ လူကယ်ပြန် ဒုညွှန်မှူးက ပြောပါတယ်။
တနိုင်းကနေ ခန္တီးမြို့ကို ခိုလှုံလာကြသူ ဒုက္ခသည်တစ်ထောင်ကျော်ကို တနိုင်း-မိုးကောင်းလမ်းနဲ့ ခန္တီးရေကြောင်း လမ်းတွေ ကနေပြန်လည် ပို့ဆောင်ပေး နေတာပါ။
တနိုင်းမှာ ခိုလှုံနေဆဲဒုက္ခသည်အချို့အတွက် လောလောဆယ် ဘာသာရေးနဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေက နေရာပေး စားနပ်ရိက္ခာပေး ကူညီစောင့်ရှောက် ထားပေမဲ့ ရေရှည် အတွက်တော့ အခက်အခဲ ရှိတယ်လို့လည်း ကချင်နှစ်ချင်း ခရစ်ယာန် အဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးက ပြောပါတယ်။
အသေးစိတ် မဆုမွန် ပြောပြပါမယ်။
ဇွန်လဆန်းပိုင်းကစလို့ အခုလို မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တို့အကြား တင်းမာလာတဲ့ စစ်ရေး အခြေအနေတွေကြောင့် ကချင် ပြည်နယ် တနိုင်းမြို့နယ်အတွင်းက ရွှေနဲ့ပယင်း မှော်တွင်း(၁၀)ခုမှာ နေထိုင်နေ သူတွေကို ဆက်ပြီးတော့ နေထိုင်ခွင့် မပြုတော့ဘဲ ဇွန်၁၅ ရက် နောက်ဆုံး ထားပြီး ထွက်ခွာ သွားကြဖို့ ဇွန်လ ၅ရက်နေ့က စလို့ တပ်မတော်ဘက်က စာတွေဖြန့်ဝေ ညွှန်ကြား ထားပါတယ်။
အလားတူ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ ကစပြီး မော်တော်ယာဉ်တွေအနေနဲ့ ဖါးကန့်မြို့နဲ့ တနိုင်းမြို့ ဆက်စပ်ဝန်းကျင်လမ်းတွေအပေါ် ည ၇ နာရီကနေ မနက် (၆) နာရီအတွင်း သွားလာခြင်းမပြုဖို့ ကချင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ KIA ကလည်း အမိန့် ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အခုလိုစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အခြေအနေမှာ တနိုင်းမြို့ မှော်တွင်းလုပ်ငန်းခွင်တွေကနေ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်ထောင်ချီထွက်ပြေးလာနေပြီး ဒီထွက်ပြေးလာတဲ့ ဒုက္ခသည် အများစုဟာ ဒေသခံတွေ မဟုတ်ပဲ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ် လုပ်ကိုင်သူတွေဖြစ်တဲ့ အတွက် သူတို့ အတွက် ခိုလှုံ နေထိုင်ရေးနဲ့ စားဝတ် နေရေး အတော်လေး အခက် အခဲ ဖြစ်နေ ကြတာပါ။
ဒီရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေ မိမိတို့နေရပ်ရင်းပြန်နိုင်ရေး ဇွန်လ ၁၂ရက်ဝန်းကျင်လောက် ဇွန်လ ၁၃ရက်နေ့ကစပြီး တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ တာဝန်ရှိ သူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေး နှင့်ပြန်လည် နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနက စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးနေပါတယ်။
အဓိကလမ်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ တနိုင်း-မိုးကောင်းလမ်းနဲ့ ခန္တီးရေကြောင်းလမ်း ကနေ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ် ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန (Deputy Director at Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ အောင်သူရိန်က ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းကို ပြောပါတယ်။
“တနိုင်းကနေပြီးတော့ ပြန်လာတဲ့ဟာက ၂ နေရာကနေ ကူညီပေးနေတယ်။ ၁နေရာကျတော့ မိုးကောင်းပေ့ါနော် ၊ မိုးကောင်းမှာကျတော့ ကျနော်တို့ဆီက ဒုညွန်ချုပ်ပေါ့နော် ။ ဒုညွန်ချုပ်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးတော့ အဲဒီမှာ သွားပြီးတော့ ကူညီပေးနေတယ်။
တနိုင်းကနေပြီးတော့ ပြန်လာတဲ့လူတွေကိုပေါ့နော် တနိုင်း-မိုးကောင်းလမ်းပေါ့နော် အဲဒီကနေ ပြန်လာတာတွေရှိတယ်။ ပြီးရင် အဲဒီကနေပြီးတော့ ရထားနဲ့ တဆင့် မြစ်ကြီးနားတို့ မန္တလေးတို့ကိုဆက်သွားတယ်။ သူတို့နေရပ်တွေပြန်တယ်။ အဲဒီလိုမျိုး ရထားနဲ့ အဲဒီလိုသွားနိုင်ဖို့ကိုလည်း ကျနော်တို့ ဒီလူကယ်ပြန် ကနေ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကိုယ်တိုင် ကျနော်တို့ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီးတော့ ရထားတွေကို ပိုပြီးပြေးဆွဲနိုင်ဖို့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ထားတာ ရှိတယ်။
အဲဒီကနေပြီးတော့ သူတို့ပြန်ကြတယ် အဲဒါက မိုးကောင်းမှာ။ နောက်တခုကတော့ ခန္တီးကတော့ ဒီအောက်ပိုင်းကို တနိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့ ရေကြောင်းနဲ့ ပြန်လာတယ်။ ရေလမ်းကနေပြီးတော့ ပြန်လာတာရှိတယ်။ ပြန်လာပြီးတော့ ခန္တီးကို ညနေဆိုရင်ရောက်ကြတယ်။
သူတို့ စက်လှေတွေနဲ့ ပြန်လာတယ်။ သူတို့ ခန္တီးကနေပြီးတော့ စက်လှေနဲ့ သွားကြိုတယ်ပေါ့နော် အဲဒါကျတော့ ၁ ရက် ၁ ရက်ကို ၃၀၀-၄၀၀ ရောက်ကြ တယ်ခင်ဗျ။ ခန္တီးမှာညအိပ်ပြီးတော့ နောက်နေ့မနက်ကျတော့ ချင်းတွင်းမြစ်ကျောင်းနဲ့ အောက်ကိုသွားပြီးတော့ သူတို့နေရာတွေ သူတို့ပြန်ကြတယ် ပေါ့နော်။”
တနိုင်းမြို့နယ်ထဲက ပယင်းမှော် ရွှေမှော်တွေမှာရှိတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများအား မှော်ထဲမှ ထွက်ခွာဖို့ တပ်မတော်က သတိပေးထားတဲ့ရက် ဇွန် ၁၅ မတိုင် ခင် ဇွန်လ ၁၃ရက်နေ့ကစလို့ စုစုပေါင်း ခန္တီးမြို့ပေါ် ခိုလှုံရောက်ရှိလာကြသူပေါင်း တရက်ကို သုံးရာကျော်နှုန်းနဲ့ လူကယ်ပြန်က စာရင်းအရ လာရောက်ခိုလှုံသူ ၁၁၇၀ လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
သူတို့အတွက် လိုအပ်ချက်တွေကို မြို့မိမြို့ဖတွေ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ နောက် ဘာသာရေးနဲ့ လူမှုအသင်းအဖွဲ့တွေကလည်း ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းကူညီစောင့်ရှောက်ကြတယ်လို့လည်း ဒေါက်တာအောင်သူရိန်က ပြောပြပါတယ်။
“သူတို့အတွက် အစားအသောက် နေရေးထိုင်ရေးပေါ့နော် ညအိပ်ဖို့ တည်းဖို့ဆိုရင် အဲဒီမှာ တည်းခိုခန်းတွေရှိတယ်။ မလောက်ဘူးပေါ့နော် တချို့နေရာတွေ က ဆိုတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ တည်းကြ တာတွေ ရှိတယ်။
စက်လှေပေါ်မှာပဲ တချို့တွေက အိပ်ကြတယ်။ ကျနော်တို့ အဲဒီမှာ အဓိက ကူညီခဲ့တာကတော့ စားရေးသောက်ရေးပေါ့နော် မြို့ပေါ်မှာတော့ သူတို့ အလှူရှင်တွေ ရှိတယ်။ အားလုံးပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ရောက်တယ်။ ကျနော်ရတဲ့ စာရင်းအရ ဆိုရင်လေ ၁ ရက်ကို ၃၀၀ ကျော် လောက်နဲ့ပေါ့။”
အခုအချိန်မှာတော့ တနိုင်း-ခန္တီးဘက်ကို ခိုလှုံလာကြသူ စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့တွေက အသင်းတော်တွေရဲ့ ဘုရားကျောင်း တွေနဲ့ မြန်မာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတွေမှာ နေရာချ ထားပေး စောင့်ရှောက် ထားပါတယ် လောလောဆယ်မှာ သူတို့ကို နေရာပေး စားနပ် ရိက္ခာပေး ကူညီ စောင့်ရှောက် ထားပေမဲ့ ရေရှည် အတွက်တော့ နေထိုင်ရေး အတွက် အခက်အခဲ ရှိတယ်လို့လည်း ကချင်နှစ်ချင်း ခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေး မှူး ဒေါက်တာ ခလမ်ဆမ်ဆွန်ကပြောပါတယ်။
“ပယင်းမှော်ဘက်က ထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေကို ကျနော်တို့ တနိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့ အသင်းတော်တွေမှာ နေရာခုပေးထားတယ်ဆိုတော့ အခုက ၁၀၀၀ ကျော် တော့ရှိပြီ သူတို့လုံခြုံမှုကို ကျနော်တို့ပေးနေတယ်။ လုံခြုံရေးပေါ့နော်
အဲဒီအတွက်လည်း ကျနော်တို့က IDP camp တွေတည်ဆောက်ပြီးမှ လုပ်ဖို့ လုပ်ထားပေမယ့်လည်း လောလောဆည်ကတော့ အဲဒီကိစ္စကို တနိုင်း အုပ်ချုပ် ရေးနဲ့ စစ်တပ်ဘက်ကတားမြစ်နေသေးတယ် ၊ အဲဒီ camp တွေမဆောက်ဖို့ပေါ့နော် ပြောနေတာကို ကျနော်တို့ သိနေရတယ်။ အနီးအနားတ၀ိုက်မှာတော့ တိုက်ပွဲတွေ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတော့ ရှိနေတယ် အဲဒီမှာ။”
ခန္တီးမြို့နှင့်နီးသော ရွှေမှော်များဖြစ်သည့် သတိပေးစာထဲမှာပါတဲ့ ဝမ်းပလာ၊ တုံပနီ အပြင် စာထဲတွင်မပါသော ခမံစီ၊ ဟွေပီ နှင့် တခြားရွှေမှော်တွေက အထူး သဖြင့် အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးတွေလည်း မနေဝံ့တော့တာကြောင့် အထက်ဖက်က စက်လှေတွေနဲ့ မြစ်ကျဉ်း နေရာသို့ထွက်လာချိန် ခန္တီးမြို့ကနေစက်လှေ အကြီးအသေးတွေနဲ့ သွားကြိုခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက် ခန္တီးမြို့ကိုလာရောက် ခိုလှုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
တပ်မတော်လေယာဉ်တွေကနေ ကြဲချခဲ့တဲ့ စာထဲမှာ အဲဒီဒေသတွင်းကနေ အမြန်ဆုံးထွက်ခွာကြဖို့နဲ့ မထွက်ခွာခဲ့ရင် KIA နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ အကြမ်းဖက် သမားတွေ အဖြစ် သတ်မှတ် ရလိမ့်မယ်လို့ ရေးသား ဖော်ပြ ခဲ့တာကို HRW လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့ကြီးက ပြစ်တင်ဝေဖန် ခဲ့ပါတယ်။
ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေ ဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့အတွက်လည်း မြန်မာစစ်တပ်ကိုရော KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ နှစ်ဖက်စလုံးကို HRW က တိုက်တွန်း ပန်ကြား ထားပါတယ်။
အခုလိုကချင်ပြည်နယ်တွင်း KIA နဲ့စစ်တပ်တို့ကြား စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေတကျော့ပြန်ဖြစ်ခဲ့တာ ခြောက်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပေမဲ့လို့ အခုအချိန်အထိကို စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာ နှစ်နဲ့ချီ နေထိုင် ခိုလှုံနေ ကြရဆဲ အနေ အထား ဖြစ်နေ သလို အခုထိလည်း တနိုင်းဘက်မှာ စစ်ဘေးရှောင် ထွက်ပြေးနေ ရဆဲဖြစ် တာမို့ ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ပေးဖို့ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ သူတွေကို ကချင် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် အရေး ကူညီပေးနေ သူတွေက မေတ္တာရပ်ခံ တောင်းဆို လိုက်ကြ ပါတယ်။
သမ္မတTrump ပြည်တွင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာကို ပေးရမယ့် ကိုယ်ပိုင် အကြွေး ဒေါ်လာ ၃၁၅ သန်း ထက် မနည်း
အမေရိကန် သမ္မတ Donald Trump ဟာ Deutsche ဘဏ်ကို ပေးရမယ့် ဒေါ်လာ သန်း ၁၃၀ အပါ အ၀င် အမေရိကန် ပြည်တွင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာ ငွေထုတ်ချေး သူတွေကို ပေးစရာ ရှိတဲ့ ကိုယ်ပိုင် အကြွေး ဒေါ်လာ ၃၁၅ သန်း ထက် မနည်း ရှိပါတယ်။
မနေ့ သောကြာနေ့ နှောင်းပိုင်းက အမေရိကန် အစိုးရ ကျင့်ဝတ်စီစစ်တဲ့ဌာနက ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ သမ္မတ ရဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ လူသိရှင်ကြား နောက်ဆုံး ထုတ်ဖော်ပြသချက်ထဲမှာ အဲဒီလို ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ၉၈ မျက်နှာပါ စာရွက်စာတမ်းကို အစိုးရ ကျင့်ဝတ်စီစစ်တဲ့ဌာနရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက် ပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတာပါ။
စာရွက်စာတမ်းပါ ဖော်ပြချက်အရ သမ္မတ Trump ရဲ့ ၀င်ငွေဟာ ဒေါ်လာသန်း ၅ ရာကျော်ကျော်လေးရှိပြီး၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်နဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ဒေါ်လာ ၅၉၄ သန်းထက်မနည်းရှိတာကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
စက်တင်ဘာလမှာ စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ သူ့ရဲ့ ၀ါရှင်တန် ဟိုတယ်ကနေ ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ ၀င်ငွေရရှိပြီး ကျန် ၁၁၅ ဒသမ ၉ သန်းကိုတော့ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် မိုင်ယမီ Trump National Doral Golf Club ကနေ ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
သမ္မတ Trump က သူ့ရဲ့ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ထုတ်ဖော်ချက်ကို သူကိုယ်တိုင်တင်ပြခွင့်ရတာကို ကြိုဆိုကြောင်း သောကြာနေ့ ညနေက ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာ အိမ်ဖြူတော်ကပြောပါတယ်။
ဒီထုတ်ဖော်ချက်ကို အစိုးရရဲ့ကျင့်ဝတ်စီစစ်တဲ့ဌာနက ပုံမှန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့အညီ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း သမ္မတ Trump ဟာ သူ့ရဲ့ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်အသေးစိတ်ကို ဖော်ပြနိုင်မယ့် အခွန်ဆောင်တဲ့စာရင်းကိုတော့ ထုတ်ဖော်တာမရှိသေးပါဘူး။
မျှဝေသူ ရစ် မောင် မှာ Sunday, June 18, 2017 No comments:
ကဏ္ဍ နိုင်ငံတကာသတင်း, အသံဖိုင်
ထိုင်း မြန်မာ သံရုံး လဝက အရာရှိ ဘတ်သန်း ၃၀ ထိုင်း ထီပေါက်
ထိုင်းနိုင်ငံ မြန်မာ သံရုံးမှာ ရှိတဲ့ သာမန် မြန်မာ နိုင်ငံကူး လက်မှတ် ထုတ်ပေးရေး ဌာနက ဒုတိယ လ၀ကမှူး ဦးအောင်မြင့်အေးဟာ ဘတ်ငွေ သန်း ၃၀ ရရှိမယ့် ထိုင်းထီ ပေါက်တယ်လို့ အဲ့ဒီ့ ဌာနကို အဓိက တာဝန်ယူရတဲ့ ခေါင်းဆောင် ရဲမှူးကြီး ဘိုအေးက ပြောပြ ပါတယ်။
ဒါဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ သားတွေ ထဲမှာ အမြင့်ဆုံး သန်းနဲ့ချီပြီး ပေါက်တာလို့ ပြောဆိုနိုင် ပါတယ်။
ဒီအတွက် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြိး ထီပေါက်ငွေကိုထုတ်ယူဖို့စီစဉ်သွားမယ်လို့ လည်း ဆိုပါတယ်။
ထိုင်းအခြေစိုက်ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းက မအေးအေးမာက သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ မြန်မာသံရုံးမှာရှိတဲ့ သာမန်မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးရေးဌာနက ဒုတိယ လ၀ကမှူး ဦးအောင်မြင့်အေးဟာ ဒီရက်ပို်င်းမှာ ထွက်တဲ့ ထိုင်းထီထဲက လက်မှတ် ၅စောင်တွဲ ကနေ ထိုင်းဘတ်ငွေ သန်း ၃၀ တန်တဲ့ ထီပေါက် ခဲ့ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာ သံရုံးမှာရှိတဲ့ သာမန်နိုင်ငံကူး လက်မှတ် ထုတ်ပေးရေး ဌာနက အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ရဲမှူးကြီးဘိုအေးက ပြောပြ ပါတယ်။
"သူ လမ်းဘေးမှာပဲ လာပြီးရောင်းတဲ့ ထီသည်ပေါ့နော်။ ထိုင်းထီသည် ဆီကနေပြီးတော့ ဝယ်လိုက် တာပေါ့နော်။ ကလေး တယောက်ကို ဝယ်ခိုင်း လိုက်တော့ အဲ့ကလေးက တစ်စောင်ကို ၈၀ နဲ့ ငါးစောင် ဆိုတော့ ၄၀၀ ဖိုးပေါ့နော်။ ၄၀၀ ဖိုးဝယ်တော့ အဲ့အထဲကနေပြီးတော့ တစ်စောင်ကို ဘတ်ခြောက်သန်းနဲ့ ငါးစောင် ဆိုတော့ ခြောက်ငါးလီ သုံးဆယ် ပေါ့နော် အဲ့တာ ပေါက်တာပါ။"
မြန်မာထဲမှာ အဲဒီလိုမျိုး သန်းဆု ထီပေါက်တာ သိပ်မကြားသိရတဲ့ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသား တဦးဖြစ်တဲ့ သူဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ ထီကို သန်းနဲ့ချီ ပေါက်တာ ပထမ ဦးဆုံး ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ရဲမှူကြီး ဘိုအေး ကတော့ ပြောပါတယ်။
"အဲ့လိုတော့ သိပ်မရှိဘူး လို့တော့ ကြားတယ်။ တချို့တော့ တရွက်၊ နှစ်ရွက်တော့ ပေါက်ကြတာ ရှိတယ်။ သူကတော့ နံပတ်တူ ငါးရွက် ဆိုတော့ အဲ့လိုဖြစ် သွားတာပေါ့နော်။"
ထိုင်းထီတွေမှာက တစောင်မှာ ၂ခုတွဲပါလာပြီး တခုကို အများဆုံးဘတ်ငွေ ၃သန်း ပေးတာဖြစ်ပါတယ် အခုသူဟာ ၂ ခုတွဲ ၅စောင်ဖြစ်တာကြောင့် ထိုင်း ဘတ်ငွေ သန်း ၃၀ကို ရရှိတာ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် မြန်မာသံရုံးက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အတူ ထီပေါက်တဲ့ငွေကို ထုတ်ယူ သွားဖို့ စီစဉ်နေ တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
"ကျနော်တို့ ဒီက သံရုံးနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မြန်မာ သံရုံးနဲ့ သတင်းပို့ပြီး တော့မှ ထုတ်ပေးရေး ကိစ္စတွေ ထိုင်းရဲ တပ်ဖွဲ့နဲ့ သတင်းပို့ ပြီးတော့မှ အကုန်လုံး စီစဉ် ထားပါတယ် ခင်ဗျ။"
ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ ထီတစောင်ကို ဘတ်ငွေ ၈၀ ရောင်းချနေတာပါ။ အရင်တုန်းကတော့ ထီတစောင်ကို နံပါတ်ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ အတွက် ဘတ်ငွေ ၁၀၀ကျော် အထိ ကနေ ၁၆၀လောက်ထိ ရောင်းချ ခဲ့ပေမဲ့ စစ်အစိုးရ တက်လာပြိးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဒီလိုရောင်းချ သူတွေကို ဖမ်းဆီး အရေးယူ မူတွေ လုပ်မယ်လို့ ကြေငြာခဲ့ တာကြောင့် တနိုင်ငံလုံးနေရာတိုင်းမှာ ၂ခုတွဲပါတဲ့ ထီတစောင်ကို ဘတ်ငွေ ၈၀နဲ့ ရောင်းချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးလည်းဖြစ် သာမန်မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးဌာနက ဒုတိယလ၀ကမှူးရဲ့ ထိုင်းထီပေါက်တဲ့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ သူတွေက တော့ လာမယ့် တနင်္လာနေ့မှာ သွားထုတ်မယ့် ကိစ္စတွေကို စီစဉ် လုပ်ဆောင် သွားမယ် လို့လည်း ပြောပြ ခဲ့ပါတယ်။
From : ဗွီအိုအေမြန်မာသတင်းဋ္ဌာန by - (မအေးအေးမာ)
မဟုတ်တဲ့ နေရာ စိုးမိုးတဲ့ တရား ဥပဒေ
ဒီတပတ် မြန်မာ့ မျက်မှောက် ရေးရာ ဆွေးနွေး ခန်းမှာ The Voice ဂျာနယ်မှာ "ကျည်ထောင်စု သစ္စာ" ဆိုတဲ့ သရော်စာ ရေးသား သူကို ဖမ်းဆီး အရေး ယူပြီး၊ အမုန်း တရား ဖြန့်ချီ ဟောပြော နေသူတွေ ကိုတော့ လွတ်လပ်ခွင့် ပေးထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရား ဥပဒေ စိုးမိုးမှုဟာ မူမှန်ပါရဲ့လား။
လက်နက်ရှိသူတွေရော သြဇာအာဏာရှိသူတွေပါ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် ကို အသိအမှတ်ပြုကြပါရဲ့လား ဆိုတာ BNI အတိုင်ပင်ခံ အယ်ဒီတာ ဦးဇင်လင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေ ဦးသိန်းသန်းဦး တို့နဲ့ ဦးကျော်ဇံသာ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီအရ ရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့ အစိုးရ တက်လာပြီးကတည်းက မီဒီယာဟာ လွတ်လပ်ခွင့် ရှိလာတယ် ဆိုပြီး တော့ အတော်လေး အားတတ်လာကြပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့် တိုင်းတာတဲ့ဇယားထဲမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံ အဆင့်အများကြီး တက်လာ ပါတယ်။
၂၀၁၇ မှာ ကြည့်မယ်ဆိုရင် အရှေ့ တောင်အာရှမှာ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ အင်ဒိုနီးရှားပြီးရင် ထိုင်းတို့အထက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက ရှိနေပါတယ်။ ဆိုတော့ အသေးစိတ်တွေ ကို မပြောခင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်က ဒီနှစ်တွေအတွင်းမှာ ဆက်တိုက်ဆက်တိုက် တနှစ်ပြီးတနှစ် တိုးတက်လာတယ်လို့ အကြမ်းမျဉ်း ပြော နိုင်ပါသလား။
ဦးသိန်းသန်းဦး ။ ။ ပေးမထားတဲ့အပြင် မီဒီယာတွေကို တရားစွဲထားတာတွေ မရပ်ဘူး။ လူထုအစိုးရ တက်လာတယ်ဆိုပေမယ့်လဲ ပြည်ထောင်စု တရား စီရင်ရေး စနစ်ဆိုတာ အရင်စစ်အာဏာအစိုးရလက်ထက်က ရေးဆွဲထားတဲ့ ဥပဒေတရပ် - အဲဒီမှာလဲ မီဒီယာတွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထားတာ မရှိဘူး။ နောက်တခါ ကျနော်တို့ရဲ့  လွတ်လပ်ခွင့်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ လူမှုရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် - အဲဒါမျိုးကိုလဲ ကျနော်တို့ အစိုးရက လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့အတွက် နိုင်ငံသားတွေ အပါအဝင်၊ သတင်းမီဒီယာသမားတွေရဲ့  ကာကွယ်ထားတဲ့ဥပဒေ လုံလုံလောက်လောက် မရှိဘူးလို့ ပြောရမှာပါ။
From : ဗွီအိုအေမြန်မာသတင်းဋ္ဌာန by - (ဦးကျော်ဇံသာ)
မျှဝေသူ ရစ် မောင် မှာ Thursday, June 15, 2017 No comments:
ကဏ္ဍ စကားဝိုင်းများ, အသံဖိုင်, ဆွေးနွေးခန်း
အာဏာ ထိန်းကျောင်းမှု ဟန်ချက်ပျက်ဟု ကြံခိုင်ရေး ဥက္ကဋ္ဌ ပြော
ကံခိုင်ရေး ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးသန်းဌေး
တချိန် တုန်းက အာဏာရ ပါတီကြီး ဖြစ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိ အတိုက် အခံ နိုင်ငံရေး ပါတီ တရပ် ဖြစ်လာတဲ့ ပြည်ထောင်စု ကြံခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံဖြိုးရေး ပါတီ အနေနဲ့ လာမယ့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရွေးကောက် ပွဲမှာ ထိုက်သင့်တဲ့ အောင်မြင်မှု ပြန်ရ လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့် ထားတဲ့ အကြောင်း ကြံခိုင်ရေး ပါတီ ဥက္ကဌက ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီကြီး တရပ်ကပဲ နိုင်ငံတော်ရဲ့ကဏ္ဍ သုံးရပ်စလုံးကို ထိန်းချုပ် ထားတဲ့ အခြေအနေနဲ့ အတူ၊ အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းနိုင်မယ့် ဟန်ချက်ပျက်ပြီး အရာရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ တနေရာ တည်းက လာတာကြောင့် ဒါဟာ တိုင်းပြည် အတွက် အကျိုး မရှိနိုင် ဘူးလို့လည်း ဝေဖန်ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
ကြံခိုင်ရေးပါတီ ဥက္ကဌ ဦးသန်းဌေးကို မမေခ တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတဲ့ နောက်ဆုံးပိုင်းကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
မမေခ ။ ။လက်ရှိပါတီရဲ့အနေအထားပေါ့နော် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို အနီးဆုံးကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီတချိန်မှာ နည်းနည်းလေးအားနည်းလာတာကို ကျမ တို့တွေ့တယ်။ ပါတီကြီး ဆိုပေမယ့် ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ တွက်မယ် ဆိုရင် အားနည်းတဲ့ အပိုင်းပေါ့နော် အဲလို မျိုးပုံစံ မျိုးတွေ ရှိနေတာဆိုတော့ လာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါတီရဲ့ အောင်နိုင်မှုကို ဘယ်လိုမျိုး စဉ်းစား ထားတာမျိုး ရှိပါသလဲ။ နောက်တခုက ဒီပါတီရဲ့အောင်နိုင်ရေး အတွက်က ၂၀၂၀ မှာ ဒီပြီးခဲ့တဲ့ အခေါက် ထက်ကျော် နိုင်မယ်လို့ ထင်သလား ဘယ်လိုများ သုံးသပ် ပါသလဲ။
ဦးသန်းဌေး။ ။ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပိုပြီးတော့ ကောင်းတဲ့ Result တွေရလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါစွဲစွဲမြဲမြဲကို ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အောင်နိုင်ခြင်း၊ မအောင်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာက အရည်အချင်းနဲ့လည်း တိုက်ရိုက်မပတ်သက်ပြန်ပါဘူး။
ဆိုတော့ ကျနော်တို့တွေညံ့သလား၊ ကျနော်တို့လုပ်ရပ်တွေမှားခဲ့သလား။ အမှားအယွင်းဆိုတာကတော့ မကင်းနိုင်ပါဘူး။ ရှိပါလိမ့်မယ် သို့သော် လူတွေမှားတဲ့ အတွက် သာမန် ယေဘုယျအမှား ထက်တော့ မပိုပါဘူး Intentionally ချောက်ထဲ ချခဲ့တာ ကတော့ မရှိပါဘူး။
ကျနော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ကျနော်တို့ Efforts တွေက ရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ဒီနေ့ ထင်ထင်ရှားရှားရှိနေသေးတယ်။ ဆိုတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုးကွယ်မှုကို ဗဟိုပြု ပြီး စဉ်းစားတဲ့ ခေတ်ကို လွန်မြောက်သွားရင်တော့ ဘယ်သူဟာ ဘာလုပ် ခဲ့သလဲဆိုတာကို လူတွေက ပြန်ပြီးတော့တွေး လာလိမ့်မယ်။
ဒီအချိန်ဟာ အဝေးလား၊ အနီးလားဆိုတာကတော့ ဒါကတော့ နည်းနည်းပြောဖို့ ခက်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒီလိုအမှန်အတိုင်းသိဖို့ မြင်ဖို့ကိုလည်း ကျနော်တို့ အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစား အားထုတ်နေပါတယ်။ ဒီအတွက် ၂၀၂၀မှာ ကျနော်တို့ ထိုက်သင့်တဲ့ အောင်မြင်မှု ပြန်ပြီး ရပါလိမ့်မယ်လို့ တင်ပြ ချင်ပါတယ်။
မမေခ ။ ။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး Process ကိုကြည့်ရင် လွှတ်တော်မှာ Balance ရှိရမယ့်အနေအထားမှာ ပါတီကြီးတခုက အုပ်စိုးနေမှုကနေ ပါတီ အကုန် လုံးကနေ ပြီးတော့ Balance အနေနဲ့ သွားနိုင်မယ့် အနေအထားမျိုးရှိနိုင်မယ်လို့ အန်ကယ်ပြောနိုင်ပါသလား။
ဦးသန်းဌေး။ ။နိုင်ငံရေးဆိုတာကတော့ အတိအကျတော့ ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်၊ ကျနော်တို့ကတော့ မျှော်မှန်းပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီလို တခုတည်း ကနေပြီးတော့ အများ အပြားကို လက်ဝါးကြီး အုပ်ထားတဲ့ အနေအထားသည် အဲဒီက ထွက်လာတဲ့ အဆုံးအဖြတ်တွေဟာ ရာနှုန်းပြည့် ပြည့်စုံမှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်မှုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေက လူတွေတဖြေးဖြေးမြင်လာကြပြီ။ မဏ္ဍိင် ၃ ရပ်ဖြစ်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေး ၊ ဥပဒေပြုရေး အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေက အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်း နိုင်ခြင်းဆိုတာက ပါတီတခုတည်းက အားလုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားရင် ဟန်ချက်ပျက်တယ်။
ဟန်ချက်ပျက်သွားတဲ့ဟာက ဘယ်အထိတောင်သွားနိုင်သလဲဆိုရင် လူတွေတန်ဖိုးထားနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ တန်ဖိုးတွေတောင်လျော့သွားနိုင်တယ်။
တခုတည်းက ပြိုင်ဘက်မရှိအားကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့် လုပ်ချင်ရာလုပ်လို့ ရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်။
ဆုံးဖြတ်မှုသည် ၁ နေရာမှာပဲ စုနေတယ်ဆိုရင် အဲဒီအဆုံးအဖြတ်ဟာ တိုင်းပြည်လိုအပ်ချက်နဲ့ တော်တော်ကို အလှမ်းဝေးသွားမယ်လို့ထင်တယ်။
အဲဒီဒဏ်ကို တိုင်းပြည်ကခံရလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ ဒီနေ့ကြည့်လို့ရှိရင် ခုနပြောတဲ့ ဟန်ချက်တွေ မညီတော့ပါဘူး။ ဟန်ချက်တွေတော်တေ်ာလေးပျက်သွားပြီ။
ပျက်နေတဲ့အတွက် ဒီအဆုံးအဖြတ်လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းပဲ ၊ ခုံရုံးလည်း ခုံရုံးမို့လို့ ၊ လွှတ်တော်လည်း လွှတ်တော်မို့လို့ သူတို့အဆုံးအဖြတ်ကို ဥပဒေနဲ့ ညီချင်း မညီချင်း ၊ ယုတ္တိ တန်ခြင်းမတန်ခြင်း၊ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခြင်း မဆီလျော်ခြင်း ဒါတွေကို အလေးပေးစဉ်းစားတာမျိုး မဟုတ်တော့ပဲနဲ့ လိုလားချက် တခုအပေါ်မှာပဲ မဲနဲ့ပဲ နေရာတကာဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါတွေဟာ တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးကိုတော့ ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမဖြစ်ဘူး။”
From : ဗွီအိုအေမြန်မာသတင်းဋ္ဌာန By: (မေခ)
ကဏ္ဍ အသံဖိုင်, တွေ့ဆုံမေးမြန်ခြင်း
လန်ဒန် ၂၄ထပ်မြင့် အဆောက်အဦး မီးလောင်ကျွမ်းမှု သေဆုံး ဒဏ်ရာရမှု များရှိ
ဗြိတိန် နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့တော် အနောက် ပိုင်းက ၂၄ ထပ်မြင့် အဆောက် အအုံမှာ မီးအကြီး အကျယ် လောင်ကျွမ်း နေပြီး မီးသတ် သမားတွေ ဆက်လက် ငြှိမ်းသတ် နေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သေဆုံးသူ ၆ ဦးကို အတည် ပြုနိုင် ပြီလို့ လန်ဒန် ရဲမှူး Stuart Cundy က ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လာမယ့် ရက်တွေ အတွင်း ရှင်းလင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေမှာ သေဆုံးသူ အရေအတွက် တိုးလာနိုင် တယ်လို့လည်း လန်ဒန် ရဲမှူးက ပြော ပါတယ်။
မီးခိုးမွှန်တဲ့ သူတွေ အပါ အ၀င် ဒဏ်ရာရသူ ၅၀ တို့ကို ဆေးရုံ ပို့ထား တယ်လို့ အစိုးရ တာဝန်ရှိ သူတွေက ပြောပါတယ်။
လန်ဒန် အနောက်ပိုင်း North Kensington က Grenfell Tower မှာ မီးလောင်တာဖြစ်ပြီး ဒီအဆောက်အအုံမှာ အိမ်ခန်းပေါင်း ၁၄၀ ရှိပြီး လူပေါင်း ၅၀၀ လောက် နေထိုင်နေကြတာလို့ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မနက်ပိုင်း ပျောက်ဆုံးနေသူတွေထဲမှာ ကလေးတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အဆောက်အအုံရဲ့ အထပ်တွေမှာ မီးစလောင်တဲ့ အချိန်မှာဘဲ အော်ဟစ် အကူအညီတောင်းသံတွေ ကြာခဲ့ကြရသလို၊ ပိတ်မိနေသူ တွေကလည်း ကယ်ဆယ်ရေး အကူအညီ တောင်းတဲ့ အနေနဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းတွေက မီးတွေဖွင့်ပြီး ပြူတင်းပေါက် တွေကနေ အချက်ပြ နေ ကြတာ ကိုလည်း တွေ့ခဲ့ကြ ရတယ်လို့ အနီးအနားမှာ နေသူတွေက ပြောပါတယ်။
အဆောက်အအုံမှာ နေထိုင်သူ တချို့ကတော့ ကလေးငယ်တွေကို ချီထားကြတာကို ပြူတင်းပေါက်ကနေ တွေ့နေရသလို၊ အထပ်နိမ့်မှာ နေသူ တချို့ကတော့ အောက်ကို ခုန်ချကြ တာလည်း တွေ့ရ တယ်လို့ မျက်မြင်တွေ့ သူတွေက ပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မနက် ၁ နာရီလောက်ကနေ စပြီး မီးလောင်နေတာ ဖြစ်ပြီး အဆောက်အအုံကြီး အတွင်း မြန်မြန် ကူးစက်လောင်ကျွမ်းနေတာပါ။
ဘယ်ကနေ စပြီး မီးလောင် ခဲ့သလဲ ဆိုတာနဲ့ ဘာကြောင့် ဒီလောက် မြန်မြန် မီးက ကူးစက်လောင်ကျွမ်းနေရသလဲ ဆိုတာကိုတော့ ပြောဖို့ စောလွန်းသေး တယ်လို့ မီးလောင်မှုကို စုံစမ်း စစ်ဆေးနေ သူတွေက ပြောပါတယ်။
မီးလောင်တဲ့ အဆောက်အအုံကနေ ကယ်ထုတ်လာရသူ တချို့ကတော့ မီးလောင်မှု အချက်ပေးသံ မကြားခဲ့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်း ၁ နာရီလောက်မှာ မီးစလောင်ချိန်မှာ ပလတ်စတစ် ညှော်နံ့တွေ ထွက်ခဲ့ တယ်လို့လည်း ပြောကြပါတယ်။
လူမှုစီးပွားရေး တိုးတက်မှု ဘာကြောင့် နှေးကွေး နေသလဲ?
တနှစ်ကျော် သက်တမ်း ရှိလာပြီ ဖြစ်တဲ့ NLD အစိုးရ လက်ထက်မှာ အများက မျှော်လင့် သလို စီးပွားရေး လူမှုရေး တိုးတက် မှုတွေ သိသာ ထင်ရှားတဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ မှုတွေ မတွေ့ရ ဘူးလို့ သုံးသပ် ဝေဖန်မှုတွေ ရှိသလို၊ လူမှု စီးပွား ဘ၀ အခြေ အနေဟာ ပိုဆိုး လာတယ်လို့ အတိုက် အခံ ပါတီကြီး ကပါ ဝေဖန် နေ ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ တနှစ်တာအတွင်း ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ကနေဒါနိုင်ငံရောက်ခိုက် ပြောပါတယ်။
ဝေဖန်သူတွေပြောသလို တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေ မတွေ့ရတာ ဘာကြောင့်လို့ယူဆပါသလဲ ဒါမှမဟုတ် တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိတယ်လို့ယူဆပါသလား။
အင်္ဂါနေ့ညပိုင်း တိုက်ရိုက်လေလှိုင်းအစီအစဉ်မှာ ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
စီးပွားရေးပညာရှင် ဆရာ ခင်မောင်ညို(ဘောဂဗေဒ)နဲ့ ဒေါက်တာညိုညိုသင်းတို့က ပင်တိုင်ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
From : ဗွီအိုအေမြန်မာသတင်းဋ္ဌာန by - (သားညွန့်ဦး)
စင်ကာပူရောက် မြန်မာ အလုပ်သမားတွေ အခက်အခဲတွေ့ရင် သံရုံးကို ဆက်သွယ်ဖို့ မေတ္တာ ရပ်ခံ
စင်ကာပူ နိုင်ငံရောက် မြန်မာ နိုင်ငံသား အလုပ် သမားတွေ အနေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင် အတွင်း ပြသနာ အခက် အခဲ ဖြစ်လာရင် စင်ကာပူနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးကို အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ် ကြဖို့နဲ့ စင်ကာပူရောက် မြန်မာ့ လူမှု ကူညီရေး အဖွဲ့ အစည်းတွေနဲ့ ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ကြဖို့ ကိုယ့် အသက် အန္တရာယ်ကို ရန်မရှာ ကြဖို့ စင်ကာပူရောက် မြန်မာ့အရေး ကူညီပေး နေသူတွေက မေတ္တာ ရပ်ခံ လိုက်ကြ ပါတယ်။
နောက် စင်ကာပူကို အလုပ်သမား စေလွှတ် လိုက်တဲ့ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီတွေ ကိုလည်း တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု ရှိအောင် မြန်မာ အစိုးရ အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာန အနေနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး အလုပ်သမားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ထိရောက်တဲ့ ဥပဒေတွေ ပြဌာန်းပေးဖို့ကိုလည်း တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်စုံစမ်းထားတဲ့မဆုမွန် ပြောပြပါမယ်။
မနေ့တနင်္လာနေ့ ညနေပိုင်းက စင်ကာပူနိုင်ငံ Depot လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ ၂၄ထပ် အမြင့်ရှိတဲ့ Interlace ကွန်ဒို ၁၈ထပ်ကနေ အိမ်အကူအလုပ်သမား မြန်မာ အမျိုးသမီးလေး တဦး ခုန်ချပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆုံးစီရင် သွားခဲ့တဲ့ အပေါ် စင်ကာပူရောက် မြန်မာတွေ အပါအဝင် မြန်မာတွေ တော်တော် များများ တုန်လှုပ် ခဲ့ကြ ရပါတယ်။
စင်ကာပူရောက်မြန်မာအိမ်အကူအလုပ်သမားတချို့ နေအိမ်တွေထဲမှာ ဘာသာ စကား အခက် အခဲဖြစ်တာ အိမ်ရှင်တွေနဲ့ အဆင်မပြေ တာတွေမှာ မွန်းကျပ် မှုတွေ ဖြစ်ပြီး အခုလို ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆုံးစီရင် သတ်သေတဲ့ အမှုတွေ ဖြစ်လာ တယ်လို့ အိမ်အကူ အလုပ်သမားတွေကို လိုက်လံ ကူညီပေး နေသူ စင်ကာပူ ရောက် မြန်မာ့အရေး ကူညီပေးနေ သူတွေက ပြောပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ အခက်အခဲတစုံတရာဖြစ်လာရင် တဦးတည်းမဖြေရှင်းပဲ သက်ဆိုင်ရာသံရုံးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ မြန်မာလူမှု အသိုင်း အဝိုင်းက အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရမယ့်နံပတ်တွေကို ခေါ်ယူအကြောင်းကြားကြပါလို့ စင်ကာပူက လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ အကူညီပေးရေးအဖွဲ့တဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ HOME ( Humanitarian Organization for Migration Economics)ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ခင်လေးက ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းကို အခုလိုပြောပါတယ်။
“ဘယ်လိုအကြံပေးချင်သလဲဆိုတော့ ကိုယ့်မြန်မာဘက်ကိုပဲ အကြံပေးလို့ရမှာပေါ့ ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မြန်မာဘက်က အေးဂျင့်တွေကနေပြီးတော့ ဖြစ်သလို ပို့နေတဲ့အခါကျတော့ အမတို့က ပင်လယ်ရေကြီးကို သဲတအိပ်နဲ့ပိတ်နေရသလို ဖြစ်နေတယ်။
အပြင်ထွက်ခွင့်မရပဲနဲ့ အိမ်ထဲမှာ ပိတ်လှောင်နေတဲ့ ကလေးတွေ ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာ အမတို့မသိဘူး။ လူတယောက်ဘယ်လောက်တောင်မှ အခန်းထဲမှာ လှောင်ပိတ်နေသလဲ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ထွက်ပေါက်မရှိတာလဲ ၊ နောက်ပြီးတော့ ပိတ်လှောင်နေတဲ့ ကလေးတွေကို အမတို့က ဘယ်လို သွားပြီးတော့ သူတို့ကို Communicate သွားလုပ် မလဲ ဆိုတာကို အမတို့မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိဘူး အဲလိုဖြစ်နေတယ်။
သူတို့မှာ ဒီကိုရောက်ရောက်ခြင်း ၁ ရက် သင်တန်းတက်ရတာရှိတယ်။ သူတို့ကတော့ တခုခု ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဒီနံပတ်တွေကိုခေါ်ဆိုပြီးတော့ သင်လိုက်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီစာရွက်တွေက အိမ်ရှင်တွေဆီရောက်သွားရင် အိမ်ရှင်တော်တော်များများက သိမ်းလိုက်တာ ခံရတဲ့အတွက် ကလေးတွေမှာ မအူမလည် စာမတတ် ပေမတတ်ဆိုတော့ ဖုန်းနံပတ်တွေလည်း အရေးရယ်အကြောင်းရယ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် ဘယ်ကို ကူရမှန်းမသိ ဖြစ်တာတွေကတော့ တပုံကြီး ပဲပေါ့နော်၊
ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အမတို့အနေနဲ့ ဒီ HOME ( Humanitarian Organization for Migration Economics) ဆိုတဲ့ဟာက 0522 ပင်နီဇွဲလား မှာလည်း ဖွင့်ထားတယ်။ နိုင်ကီ ပလာဇာ 0622 မှာလည်း ဖွင့်ထားတယ်။ သူတို့အချိန်မရွေးအကူအညီတောင်းလို့ရတယ်။ မြန်မာသံရုံးကလည်း အခုဆိုရင် အမြဲတမ်း welcome ဖြစ်နေတာ။”
စင်ကာပူက မြန်မာကလပ် ဦးဆောင်သူတဦးလည်းဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ခင်လေးဟာ သေဆုံးသူအမျိုးသမီးရဲ့ရုပ်အလောင်းကို စင်ကာပူနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသံရုံး တာဝန် ရှိသူတွေနဲ့ အတူ ဒီကနေ့ စင်ကာပူဆေးရုံကြီးမှာ လိုက်လံကြည့်ရှု့ခွင့် ရခဲ့တာပါ။
မနေ့တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ် နောက် နာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း သံရုံးဘက်က လိုက်လံ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုလည်း ဒေါ်ခင်လေးက အခုလိုပြောပြပါတယ်။
“တကယ်တမ်းက အချိန်ရတယ်တဲ့ ၊ ညနေ ၅ နာရီခွဲကတည်းက အဲဒီအစွန်းမှာထိုင်ပြီး သူခုန်ချဖို့ လုပ်တာပေါ့နော် ၊ အခုခုန်ချတာက ၇ နာရီဆိုတော့ ၁ နာရီခွဲ ၊ မိနစ် ၉၀ လောက်အချိန်ရတယ်။
ဒါပေမယ့် ပြဿနာက သူကလည်း မြန်မာဆိုတဲ့ အတွက် singapore civil defense force (scdf) အနေနဲ့ မြန်မာနဲ့ ပြောနိုင်တဲ့ တယောက်ကို ဖျောင်းဖျဖို့ ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးက လက်မခံဘူး။ ကောင်မလေးကသူ့မှာ အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်း ရှိတယ်တဲ့ သူနဲ့ပဲ စကားပြောချင်တယ်တဲ့ ၊ သူခင်တဲ့ ကောင်မလေးက ဘယ်သူလဲ ဆိုတော့ အင်ဒိုနီးရှား မလေး။ သူခုန်ချတဲ့အထိပေါ့နော် အင်ဒိုနီးရှားကောင်မလေးနဲ့ စကားပြော သွားတယ်ပေါ့နော်။
အဲလိုဟာကို မြင်ပြီးတော့ အင်ဒိုနီးရှားကောင်မလေးလည်း ဆေးရုံရောက် သွားတယ်ပေါ့နော် သူလည်း shock ဖြစ်သွား တာပေါ့နော်။ အမတို့ မော်ကျူရီမှာ သွားကြည့်တယ် ဆိုတာကလည်း သံရုံးနဲ့ အမပဲ ပါတာလေ။ အေးဂျင့်တို့ အိမ်ရှင်တို့ဘယ်သူမှ မပါဘူး ရဲက သူတို့ကိုပြတာမဟုတ်ဘူး။
ကောင်မလေးက အမေမရှိတော့ဘူးလို့ သိတာကို ဆိုတော့အမတို့လှမ်းပြီးတော့ ဆက်သွယ်နေတယ်။သူ့အဖေတော့ သိပြီလို့တော့ပြောတယ်။ သူ့ Decision မှာမူတည်ပြီးတော့ သံရုံးက ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ ထင်တယ်။”
စင်ကာပူနိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုအခက်အခဲပြသနာမျိုးပဲကြုံကြုံ အရင်ဆုံး စင်ကာပူနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသံရုံးကို ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားကြဖို့ အထူးသဖြင့် မြန်မာသံရုံး HOTLINE ဖြစ်တဲ့ 8246 8581 ကို ခေါ်ယူကြဖို့နဲ့ စင်ကာပူရောက်မြန်မာ အသိုင်းအဝိုင်းက အလုပ်သမားရေး တွေကို လိုက်လံကူညီပေးနေသူတွေရဲ့ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပတ်တွေကို မှတ်သားထားကြဖို့ကိုလည်း စင်ကာပူက Myanmar Volunteer Familyအဖွဲ့ ဦးဆောင်သူ ကိုအောင်ဝင်းထွဋ် ကလည်း တိုက်တွန်းပါတယ်။
“ပြဿနာ တခုခုဖြစ်လာလို့ရှိရင် ဘာမှ ရှက်စရာလည်းမလိုဘူး၊ ကြောက်စရာလည်းမလိုဘူး၊ မြန်မာသံရုံးကိုသာ ပြေးပါ။ တခုခု ဖြစ်ရင် မြန်မာသံရုံးကို ဖုန်းခေါ်ပါ။ မြန်မာသံရုံးက ၂၄ နာရီ HOTLINE ဖွင့်ပေးထားတယ်။ အချိန်မရွေးခေါ်လို့ရတယ်။ မြန်မာသံရုံးနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Lawyer တွေလည်းရှိတယ်။
HOME လိုမျိုး ကယ်ဆယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိတယ်။ နောက်ပြီးတော့ မြန်မာသံရုံးကို ပြေးလာတဲ့ကလေးတွေအတွက် ထားဖို့ အဆောင်တွေလည်း သူတို့ဆီမှာ အဆင်သင့်ရှိပြီးသား။ ဒီမှာ Plan တွေအများကြီးချပြီးသား။”
အထူးသဖြင့်ကတော့ စင်ကာပူနိုင်ငံကို အလုပ်သမားတွေစေလွှတ်လိုက်တဲ့ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေကို မြန်မာအစိုးရ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူတွေ အနေနဲ့ ဒီ့ထက်ပိုပြီး တင်းကျပ်တဲ့ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု ရှိအောင် စိစစ်အရေးယူ ဆောင်ရွက်သင့်တယ် လို့လည်း ပြည်ပမှာ သွားရောက် အလုပ် လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အလုပ်သမား အခွင့်အရေးတွေကို ထိထိ ရောက်ရောက် ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေ ပြဌာန်း ပေးဖို့ ကိုလည်း အလုပ်သမားရေး ကူညီပေးနေ သူတွေကတောင်းဆိုပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်သင့်တာတွေကို ဒေါ်ခင်လေးပြောပြတာကတော့-
စင်ကာပူကို အလုပ်လာရောက်လုပ်ကိုင်မယ့်မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့လည်း မိမိတို့လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အခက်အခဲတွေ အကြောင်း တကယ်လို့ အခက်အခဲဖြစ်လာရင် ဆက်သွယ်ရမယ့် အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရမယ့်နံပတ်တွေ အဆက်သွယ်တွေ နောက် ဘာသာစကား အခြေခံ နားလည် နိုင်အောင်နဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင် နားလည်မှု ရှိအောင် မိမိတို့အနေနဲ့ လည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင် လာကြသင့်တယ် လို့လည်း အလုပ်သမားတွေကို လိုက်လံ ကူညီပေးနေသူတွေက သတိပေးကြပါတယ်။
From : ဗွီအိုအေမြန်မာသတင်းဋ္ဌာန by (မဆုမွန်)